Mifankatia Foana ny Tena Kristianina | Igor Ochigava sy Gizo Narmania
Igor: Anisan’ny antoko-mpitory tao Tkvartchéli, any Abkhazie, izahay mirahalahy. Tany Djvari, tany amin’ny 85 kilaometatra, no nisy ny fiangonana mpiahy anay. Tsy maintsy nankany isam-bolana àry aho mba haka boky sy gazety ho anay. Tsy te ho eo ambany fifehezan’i Géorgie intsony i Abkhazie, rehefa rava ny Firaisana Sovietika. Raikitra ny ady teo amin’ireo mpikomy sy ny tafika géorgien, tamin’ny 1992, ka tena mafy ny fiainana.
Gizo Narmania sy Igor Ochigava
Nifarimbona nanampy an’ireo mpiara-manompo izy ireo, nandritra ilay ady tany Abkhazie.
Gizo: Herintaona talohan’ilay ady aho no vita batisa, tamin’izaho 21 taona. Natahotra ireo rahalahy rehefa nipoaka ny ady, ka tsy sahy nitory. Tena mpiandry tsara anefa i Igor. Hozy foana hoe: “Amin’izao indrindra ny olona no mila ampaherezina. Mila mitory foana isika, raha tsy izany tsy hatanjaka ny finoantsika.” Nitory hafatra mampahery avy ao amin’ny Baiboly àry izahay isan’andro, fa nila mailomailo fotsiny.
Igor: Tsy azo naleha intsony ilay lalana nahazatra nankany Djvari, rehefa nipoaka ny ady. Tsy maintsy niova lalana àry izahay rehefa naka boky sy gazety. Soa fa lehibe tany amin’iny faritra iny aho, dia nahita lalan-kafa tany an-tendrombohitra sy tany anaty toeram-pambolena dite. Mbola natahorana hifanehatra tamin’ny miaramila nirongo fiadiana ihany anefa izahay, na hanitsaka vanja nilevina. Naleoko àry nandeha irery sao hahita loza ireo rahalahiko. Afaka nitondra sakafo ara-panahy ihany aho isam-bolana, noho ny fanampian’i Jehovah. Nanatanjaka ny finoanay izy ireny.
Tsy nisy ady tany Tkvartchéli tamin’izany. Tsy ela anefa dia natao fahirano ny tanànanay, ka lasa sahirana ny olona. Lany ny tahirin-tsakafo rehefa nanakaiky ny ririnina, ka very hevitra izahay hoe inona no hohanina. Faly be izahay rehefa naheno fa nanangona sakafo ho anay ireo rahalahy tany Djvari.
Gizo: Nanontany anay i Igor indray andro raha azo atoby ao aminay ny sakafo nangonin’ireo rahalahy, ary ao koa no hizarana azy. Efa handeha haka an’ireo sakafo tany Djvari izy tamin’io. Tena natahotra izahay sao maninomaninona eny an-dalana izy. Be dia be mantsy ny toeram-pisavana. Nety hifanehatra tamin’ny miaramila mitam-piadiana sy ny jiolahy koa izy.—Jaona 15:13.
Faly be izahay rehefa tonga soa aman-tsara izy, andro vitsivitsy taorian’izay. Feno sakafo ny fiara nentiny, ka ampy ho anay nandritra ny ririnina. Hitanay tamin’ireny fotoan-tsarotra ireny hoe mifankatia foana ny tena Kristianina.—1 Kor. 13:8.
Inona no Ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah Rehefa Misy Loza?
Rehefa misy loza, dia ataonay haingana izay hanomezana fanampiana sy hampaherezana an’ireo tra-boina. Ahoana izany?
Tia Namana Izahay ka Manampy Rehefa Misy Loza